China Hay Cover orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
ShiningPlast Hay Cover Tarps dia namboarina amin'ny lamba vita amin'ny hodi-posy 200-400gsm UVI. Rehefa vita ny ahitra, mihodina handrakotra ny basinao amin'ny ririnina sy ny fiposahan'ny masoandro. Ity rakotra ity dia ahafahanao mitahiry tamboho fanampiny sy hisorohana ny fahaverezan'ny otrikaina.
Hay Tarps dia manasongadina poly mavesatra mahery sy manamafy orina ny UV izay mahatohitra UV ary tsara ho toy ny Farm Tarp. Ny akora poly dia UV tahan ary tena tsara ho an'ny asa fambolena ho an'ny famafazana sy ny sarony. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mandoa ny tenany ao anatin'ny herintaona. Izy io dia namboarina avy amin'ny tanjaka avo, lamba vita amin'ny kofehy misy tombo voaisy tombo-kase ho an'ny fanoherana sy ny fanoherana ny rivotra. Ny hodi-maso sy ny tranokala dia napetraka ao anaty lamba 4 sosona, manolotra hery misintona 500 kilao, mahatonga fiaretana betsaka.
Size 1.5Mx2M ~ 20Mx50M
· Mafy sy maharitra: Ny fonon'ny PE Hay manana kalitao matanjaka ary matevina handrakotra ny amponao.
· UV-Resistant: Nampiasa ny fitsaboana sy fanamainana UV tsara indrindra izahay mba hiantohana ny fametrahana mandritra ny fiparitahan'ny UV maharitra mandritra ny ririnina na amin'ny andro ratsy kokoa.
Previous: Kamiao tariby
Manaraka: Mandrakotra lay